Unothi Uqhushululu: Ukuqhekeka kwesiphango
Vumela idemon yakho yangaphakathi kunye ne-Zero Insurgency yethu: I-Sandstorm Hack
Ulawula ukuba ungafikelela ixesha elingakanani kwi-insurgency yethu: I-sandstorm cheats-Thenga i-1-day Product Key namhlanje!
Ngamanye amaxesha awuzukuoneliseka ziintsuku nje ezimbalwa! Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
Yiba lilungu eliqinisekisiweyo losapho lweGamePron! Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Uqhushululu: Isitshingitshane ngumdlalo oqinisekisa inqanaba lokugxila, kwaye ukuba uyasilela, ngekhe ube nempumelelo enkulu. Ngombulelo, ungasebenzisa i-Insurgency: I-Sandstorm Zero Hack ukufumana isandla esiphakamileyo kuwo onke amadabi akho!
Uqhushululu: Ulwazi ngeSiphepho sikaZero
Iinyani zokudubula zomkhosi azisoloko zibonakala ebantwini, kodwa Uqhushululu: Isitshingitshane ngumdlalo oya kuvavanya izakhono zakho ngaphezulu kakhulu komdubuli ophakathi. Kuya kufuneka ukhathazeke malunga nokuba zeziphi izixhobo eziza kubakho ngexesha ledabi, kunye nenqanaba lesakhono soogxa bakho. Ukuba uyenyuka ngokuchasene nabadlali abanezakhono eziphezulu abadlale okwethutyana, usebenzisa i-Insurgency: Sandstorm Zero Hack inokuba kuphela kwempendulo esebenzayo. Ukuphuhlisa izakhono zakho ngokwendalo yinkqubo enzima, ngakumbi xa kufikwa kulo mdlalo; into elungileyo ungakhohlisa indlela yakho kuyo yonke!
Ngokubonakalayo, unikwe ukufikelela kwiTshaba lwe-ESP kunye noLwazi (ukuvumela ukuba ubone iintshaba kude). Unokusebenzisa iAimbot eneziKhangeli eziBonakalayo, ukuLungelelanisa / ukuJongana nokuJongana, kunye nokukhethwa kwamathambo! Ukususwa kweRecoil kunye ne-Sway kunokwenzeka ngesi sixhobo.
Utshaba i-ESP (Iibhokisi, iLines, Skeleton)
Malunga noqhushululu: Imvula yesiqhwithi uZero kugula
Ngabadlali abanamava kuphela abaya kuba nakho ukulawula phezulu ngaphandle kokusebenzisa iihacks, ngakumbi xa kufikwa kumdlalo onje nge-Insurgency: Sandstorm. Ngamanye amaxesha kuyakufuneka ungene kunye neqela labahlobo ukuze wonwabe, kodwa akusekho njalo xa une-Insurgency: Sandstorm Zero Hack kwicala lakho. Ukukopela kwangaphakathi kulula ukuyisebenzisa kwaye kuya kukuguqula ube ngumatshini wokubulala weentlobo! Ingasetyenziselwa imowudi epheleleyo yesikrini, kwaye nangona iHWID Spoofer ingafakwanga, ungayithenga ngokuthe ngqo kuthi kwi-GamePron.
Kutheni usebenzisa i-Insurgency: I-Sandstorm Zero Hack ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli beehacks kunye nokukhohlisa ngekhe babeke umthengi kuqala, kwaye nokuba bayabanga, ngekhe bakuphathe njengoko sisenza apha eGamePron. Ukubeka ukhuseleko lwabasebenzisi bethu kunye nokonwaba ngaphambi kwayo nayiphi na into esenze ukuba sibe yeyona nto iphambili kwi-intanethi, kwaye asizicwangcisi ukutshintsha iindlela zethu! Nangona ingeyiyo iStreamproof, ungawudlala umdlalo ngokukhohlisa kusebenze kwimowudi yesikrini esigcweleyo; ikwanazo zonke iimpawu ozifunayo ukuze ufumane impumelelo ngelixa udlala i-Insurgency: Sandstorm.
Kukangaphi uzifumana ucinga ukuba ungalwenza njani uhlengahlengiso ngelixa ukopa? Ezinye izixhobo zihlala zikushiya ekufeni kwakho, ngokungathi awuzange uhlengahlengise useto ngaphambi kokuvula umdlalo wakho. I-GamePron yazisa ngemenyu ethembekileyo yomdlalo okhoyo kuzo zonke izixhobo zethu, kunye ne-Insurgency: I-Sandstorm Zero Hack eyahlukileyo! Unokucwangcisa useto lwakho lokukhangela njengoko ungathanda apha kwi-GamePron, njengoko imenyu yethu yomdlalo isenza ukuba ulungelelwaniso lwamava akho okugenca lubethwe ngumoya. Abo bazamile ukusebenzisa ii-hacks ezikumgangatho osezantsi (ezingafakwanga kwimidlalo yomdlalo weqonga) kwixa elidlulileyo bazi kakuhle ukuba sithetha ngantoni!
A2. Hayi, awungekhe ushukume ngokukhohlisa.
Ilindelwe Lawula kunye ne-Insurgency yethu: Isiqhwithi seSandstorm uZero?